Maitiro ekutenga masheya: Chii chinodiwa, matanho uye kwekutenga | Ehupfumi Zvemari
Mushure memwedzi yakawanda vasina kubva pamba uye vasina zororo rakawanda rekuita, vanhu vazhinji vakwanisa kuchengetedza kupfuura nakare kose. Asi ungawana sei purofiti? Kune nzira dzakawanda dzakasiyana dzekugadzira imwe mari nemari, imwe yacho ndeyekuwana zvikamu zvekambani. Asi chenjera: Sezvo isu tichigona kuita mari mumusika wemasheya, isu tinogona zvakare kurasikirwa nayo. Kuti tibatsire varimi venguva yemberi kutanga rwendo urwu rwemari, isu ticha tsanangura muchinyorwa chino nzira yekutenga masheya.
Chekutanga pane zvese zvinokurudzirwa kwazvo investa chete iyo mari yatisingazodi munguva pfupi, kuitira kuti tisarase zvese kana zviwanikwa zvedu zvikasaenda zvakanaka. Uye zvakare, chinhu chake chinenge chiri chekutanga nemari shoma kuti tidzidze uye zvishoma nezvishoma kuwedzera nhaka yedu. Kana iwe uchida kudzidza kutenga masheya nekudyara mari yako, verenga mberi.
1 Chii chinotora kutenga masheya?
1.1 Zvikanganiso zvakajairika
2 Ndeapi matanho ekudyara mumatura?
3 Ndekupi kwaunogona kutenga masheya?
Chii chinotora kutenga masheya?
Ngatitangei titaure nezve izvo zvatinoda kutenga masheya. Chinhu chakanyanya kukosha pachena imari yakakwana yekuisa mari. Murevereri zvakare akakosha, kungave kuburikidza kubhangi kana broker, kuti ukwanise kuwana pamusika wemasheya. Chimwe chinhu chekuchengetedza mupfungwa ndechekuti kuisa mari kunotora nguva kuitisa zvidzidzo, makambani ekutsvagisa uye kuverenga purofiti uye kurasikirwa. Ehe, isu tinofanirwa kugara tichifunga huwandu hwemari iyo yatinogona kurasikirwa nayo mukutenga kuti tione njodzi dzinosanganisira izvi. Iyo yakakosha maitiro ekuziva nzira yekutenga masheya.
Kunyangwe munhu wega wega aine nzira yake uye zano rekudyara, pane zvikanganiso zvakajairika vanoisa mari vazhinji. Saka kuti iwe udzidze kutenga masheya pasina kuita izvi zvikanganiso, tichaenda kunotaura pane mamwe acho:
Mutengo kudzingirira: Kana kukosha kwechitoro chekambani kuchiramba kuchikwira, vanhu vazhinji vanowanzo pinda. Uku kukanganisa kwakajairika, sezvo zvichikwanisika kuti vatyairi ava vanonoka kusvika voguma vatambura kururamiswa kwemusika, zvinoreva kuti kuderera kweiyo kukosha.
Usashandise stoploss: Kana tichitaura nezve "stoploss" tinoreva mutengo wekumira watakamisa mudura. Mune mamwe mazwi: Ndiyo mari yepamusoro yatiri kuda kurasikirwa neicho chiitiko. Kana mutengo wangosvika panomira isu takaisa, stock ichatengesa zvoga Izvo zvakakosha kushandisa iyo stoploss, sezvo inotidzivirira kubva pakurasikirwa kukuru.
Kurasikirwa kusingaperi: Kanganiso yakaipisisa yezvose ndeye kuchengetedza kurasikirwa kwenguva isingazivikanwe yenguva. Zvinoitika kune vakawanda varairidzi kuti ivo vanoda kuchengeta yavo migove mukambani kunyangwe ivo vasingaregi kurasikirwa navo mari navo. Sei vachizviita? Nekuti ivo vanotarisira kuti ichapora uye kuti inozopedzisira yagadzira yakakosha mari, kana ivo vanongotarisira kudzoreredza kudyara. Aya marudzi emamiriro ezvinhu anopedzisira ave kukanganisa vanhu vazhinji.
Usaparadzanise: Chinhu chakanakisa kuita kusiyanisa portfolio yedu. Kana yagadzirwa nemari dzinoverengeka, hazvizoenderana nekuchengeteka kumwe chete, zvichideredza njodzi yekurasikirwa nezvose.
Ndeapi matanho ekudyara mumatura?
Usati watanga kuisa mari mumasheya kana mune chero imwe sarudzo inopihwa nemusika wemasheya, zvakanaka kuti uteedzere nhanho nhanho dzatichazotaura pamusoro apa. Izvi zvisina zvakakosha zvekudzidza kutenga masheya.
Save: Izvo zvakakosha kuti uchengetedze kusvikira iwe uine mari yakakwana yekuisa mari uye, panguva imwechete, uve nematiresi kuitira kuti kuyedza kwedu kukanganisika. Naizvozvo, hazvikurudzirwe kuisa 100% yemari yedu, nekuti isu tinogona kurasikirwa nezvose.
Bhiri: Zviripachena, isu tinofanirwa kuvhura account kubhangi, mutengesi wemasheya kana broker. Izvi zvichatipa mukana wekutengesera.
Mapuratifomu ekufananidza: Tisati tapinda munyika yemusika wemasheya, isu tinofanirwa kudzidzira imwe nguva nemapuratifomu ekuenzanisa. Kuburikidza navo isu tinokwanisa kuita zviitiko zvemarudzi ese uye kuwana pfungwa yekuti vanoshanda sei uye maitiro ekubata zviito. Kazhinji, vatengesi vanosanganisira aya mapuratifomu mumapeji avo ewebhu kana kunyorera.
Kuongorora: Musika wemasheya hauna kufanana nejotari. Izvo hazvisi zvekudyara mumakambani makuru kana kutenga masheya nekuti shamwari kana terevhizheni yataura izvi kwatiri. Tinofanira kunyatsoziva kwatinoisa mari yedu. Kuti uite izvi, kuita ongororo yakasimba yekambani usati watenga masheya kwakakosha zvakanyanya. Chii chiri kukosha kwayo chaiko? Marii yaunotambira pagore? Zvigadzirwa zvaunopa zvine ramangwana here? Kuisa mari mukambani hachisi chisarudzo icho chatinofanira kutora zvishoma, zvinoda kudzidza kumberi.
Pakupedzisira tine tora zvikamu: Kuti tiite izvi tichaverenga huwandu hwemari iyo yatinoda kuisa mari uye zvichibva pane izvi isu tinowana akawanda kana mashoma masheya. Nekudaro, zvakanakisa kwete kubheja zvese pane imwe kambani, asi kusiyanisa yedu portfolio. Izvi zvichatibatsira kutora njodzi shoma yekurasikirwa nezvose muchiitiko chekuti mari inoenda yakaipa.
Ndekupi kwaunogona kutenga masheya?
Kana isu tichida kuisa mari mumusika wemasheya, iyo inosanganisirawo kutenga masheya, isu tinowanzo kuve nesarudzo mbiri:
Isu tese tine account yebhangi, asi kuitira kuisa mari kana kutenga masheya ekambani, kazhinji mabhangi anotipa chaiyo account yeiyi, Zvakanaka, iwe unofanirwa kusangana nezvimwe zvinodikanwa zvinoenderana nesangano. Kuita zvekutengesa pamusika wemasheya kuburikidza nemabhangi kazhinji ndiyo yakachengeteka sarudzo, asi dzimwe nguva zvakare inodhura nekuda kwemakomisheni.
Bhuroka, anonziwo stock broker, mubatsiri wehupfumi anobatsira kutenga nekutengesa mumusika wemasheya uye ane muripo unobva pakuunganidzwa kwemakomisheni. Ivo anowanzo kuve akasununguka kushandisa kupfuura emabhangi uye anodhura. Zvisinei, kune vazhinji vatengesi vasingabatanidzane nemusika, ndiko kuti: Kana isu tikatenga masheya kuburikidza navo, isu hatisi kutenga chaiko zvikamu mumusika. Naizvozvo, tinofanira kuzvizivisa pachedu kuti ndeapi asati avimbika.
Ndinovimba ichi chinyorwa chakubatsira iwe kuziva kutenga masheya uye zvaunofanira kufunga nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Nzira yekutenga masheya